တရုတ်က မြို့တစ်မြို့မှာ ငှက်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ တူလွန်းတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီး ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ် – Shwe Myanmar
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းက မြို့တစ်မြို့ရဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ ငှက်ကြီးတစ်ကောင် အတောင်ဖြန့် ပျံသန်းနေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဧရာမ တိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခု ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။. ကောင်းကင်မှာ တိမ်စိုင်
တိမ်လိပ်တွေက ပုံသဏ္ဍန် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲနေတတ်တာက ပုံမှန် သဘာဝ ဖြစ်ရပ်မျိုးပါ။. ဒါပေမဲ့ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်က ဖူကျန်းပြည်နယ်၊ ဖူဇူးမြို့ရဲ့ ကောင်းကင်မှာ တွေ့ရတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးကတော့ ငှက်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့
အရမ်းတူပြီး အနားသတ်တွေကလည်း ပိရိသေသပ်နေပါတယ်။. ပြီးတော့ ဘေးနားတဝိုက်မှာလည်း တခြား တိမ်မျှင်တွေ ရှိမနေဘဲ ရှင်းလင်းနေတာကြောင့် မြို့ပေါ်မှာ ငှက်ကြီးတစ်ကောင် အတောင်ဖြန့်ပြီး
အုပ်မိုးထားသလို ပုံရိပ်မျိုး ပိုပြီး ပီပြင် ပေါ်လွင်နေပါတယ်။. ညနေပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်ထုကြီးဟာ နာရီပေါင်း အတော်ကြာတဲ့ထိ မပျောက်ပျက်ဘဲ တည်မြဲနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။.
အဲဒီတိမ်ထုကြီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အသွင်အပြင်ကို သတိပြုမိသွားတဲ့ မြို့ခံ တော်တော်များများက ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ပြီး လူမှုကွန်ရက် မီဒီယာတွေပေါ်မှာ တင်ထားကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။.
Crd;-7day TV News
တရုတျနိုငျငံ တောငျပိုငျးက မွို့တဈမွို့ရဲ့ ကောငျးကငျယံမှာ ငှကျကွီးတဈကောငျ အတောငျဖွနျ့ ပြံသနျးနတေဲ့ ပုံစံမြိုး ဧရာမ တိမျတိုကျကွီးတဈခု ဖှဲ့စညျး ဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။. ကောငျးကငျမှာ တိမျစိုငျ တိမျလိပျတှကေ ပုံသဏ်ဍနျ
အမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲနတေတျတာက ပုံမှနျ သဘာဝ ဖွဈရပျမြိုးပါ။. ဒါပမေဲ့ ဇနျနဝါရီ ၈ ရကျက ဖူကနျြးပွညျနယျ၊ ဖူဇူးမွို့ရဲ့ ကောငျးကငျမှာ တှရေ့တဲ့ တိမျတိုကျကွီးကတော့ ငှကျကွီးတဈကောငျနဲ့ အရမျးတူပွီး အနားသတျတှကေလညျး
ပိရိသသေပျနပေါတယျ။. ပွီးတော့ ဘေးနားတဝိုကျမှာလညျး တခွား တိမျမြှငျတှေ ရှိမနဘေဲ ရှငျးလငျးနတောကွောငျ့ မွို့ပျေါမှာ ငှကျကွီးတဈကောငျ အတောငျဖွနျ့ပွီး အုပျမိုးထားသလို ပုံရိပျမြိုး ပိုပွီး ပီပွငျ ပျေါလှငျနပေါတယျ။. ညနပေိုငျးမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ တိမျထုကွီးဟာ
နာရီပေါငျး အတျောကွာတဲ့ထိ မပြောကျပကျြဘဲ တညျမွဲနခေဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။. အဲဒီတိမျထုကွီးရဲ့ ထူးခွားတဲ့ အသှငျအပွငျကို သတိပွုမိသှားတဲ့ မွို့ခံ တျောတျောမြားမြားက ဗီဒီယိုတှေ ရိုကျပွီး လူမှုကှနျရကျ မီဒီယာတှပေျေါမှာ တငျထားကွတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။.
Previous PostPrevious တစ်ရက်ကို သိန်း (၃၀) ဖိုးလောက်ရောင်းရတယ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး ရေမုန့် (ရုပ်သံ)
Next PostNext ဖွံ့ထွားတဲ့ညို့အားပြင်းအလှတွေက ရင်ဖိုစရာကောင်းပြီး စွဲမက်လှိုက်မောစေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အကြမ်းစားဗီဒီယို